China Light brown T101 / Brown T108 / Brown T103 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Baizan
T101 mena / volontany T108 / volontany T103
Baizan PVB interlayer dia fitaovana macromolecule novolavolain'ny polyviny, ny resin butyral izay nopetahany plastika ary navoakan'ny plastika. Ny sarimihetsika PVB misy fangaraharana mazava, hafanana sy fanoherana mangatsiaka, elastika, dia mifikitra tsara amin'ny vera tsy miaina sy ny fanaovana vera azo antoka laminated. Ny famaritana matetika ny hateviny dia eo anelanelan'ny 0,2 mm - 2 mm.
Baizan PVB interlayer no ampiasaina amin'ny fanaovana vera azo antoka laminated. Ny vera voadio dia vera manokana izay natsofoka tamin'ny sarimihetsika PVB teo anelanelan'ny takelaka fitaratra iraisana roa, izay eo ambanin'ny mari-pana sy ny faneriterena avo lenta, dia mamatotra hamorona fananganana tokana. Noho ny fitaratra vita amin'ny laminated PVB miaraka amin'ny asan'ny fiarovana, fiarovana ny hafanana, porofo amin'ny tabataba ary fanoherana ultraviolet, sns
Previous: Mazava pvb
Manaraka: maitso maivana GN101 / Vridis GN108
B113 manga / mazava manga B102 / Ford manga ...